Ọrịa, ọgwụ | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Ọrịa, Ọgwụ
Azithromycin ma ọ bụ Sumamed? dọkịta ahụ gwara m ka m lee anya maka ọnụahịa maka ego ahụ, m na-eme nzuzu, gịnịkwa ka ị zụrụ?
Azithromycin ka ọ bụ Sumamed? Dọkịta ahụ wee lee anya na nhọrọ maka ọnụahịa ahụ, enwere m nzuzu, mana gịnị ka ị zụtara? n'otu ihe ahụ, ọ bụ nanị ndị nnọchi ọgwụ na - ere "sum sum" ka ọ na - akwụ ụgwọ 400 rubles, na ...
Kedu ihe ị ga-eme na ọkụ? ewe iwe!
Kedu ihe a ga-eme n’ọkụ? ọ na-afụ ụfụ! ọ na-ewute m iheoooo na-eme…. Ọkụ dị iche .. Ọ bụrụ na ọkụ a bụ ọkụ (site na kandụl, dịka ọmụmaatụ), mgbe ahụ enwere ike iji Panthenol (ma ọ bụrụ na ọ buru ibu na mpaghara). nke ukwuu ...
2 ewepụla n'ubu ya ebe ọ bụ na amaghị m ma ọ bụrụ na ọ dọwara adọka
2 abiala n'ubu ya. Amaghi m ma oburu na ego adighi m ego ma obughi maka ego ole m choro oru, ebe obu na agbachi egbugbere anya (egbugbere anya) adighi adi.
E nwere bọl na lobe.
E nwere bọl na lobe. Enwere m otu ihe ahụ. Anyị ga-echere otu ụbọchị, a ga-amarakwa ihe niile, ị ga-ahụ dọkịta. Ọkachamara maka ndị dọkịta. Atheroma ka e guzobere site na ...
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ngwongwo lymph n'olu na-aza aza. Kedu ka a ga - esi gwọọ ya mma n'enweghị injections. Ọ ga-ekwe omume iji ude mmirimmiri dochie ha?
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ngwongwo lymph n'olu na-aza aza. Kedu ka a ga - esi gwọọ ya mma n'enweghị injections. Ọ ga-ekwe omume iji ude mmirimmiri dochie ha? N'ọnọdụ ọ bụla, ụlọọgwụ ahụ. Ọmịfụ nke lymph ọnụ abụghị ihe, ma ...
Ngwurugwu n'ime ikiri, nke dị nso na cheekbone
Ọkpụkpụ n'ime agba, na nso ntì. Ọ dị mma, ọ bụ stomatitis. Enwere ọgwụgwọ maka stomatodine, ọ dị ka. Ọ dị mkpa iji mmiri saa ma gafere. O kwere omume na ogwu ogwu. Lelee google "stomatitis" na usoro ọgwụgwọ (ihicha).
gwa m ihe nkpuchi dị mfe maka ihe otutu n'ime ụlọ
Podskajite mfe masks maka ihe otutu n'ụlọ Nke a abụghị kpamkpam !!!! NTỤTỤ M KWESỊRỊ MGBE M BỤ ECHICHE MERE 1 WEEK Ọ dịtụghị mgbe m chere na m ga-ede akwụkwọ arịrịọ ọha na eze, ...
Gịnị nwere ike ịgwọ ọrịa endometriosis ụmụ ọgwụgwọ?
Kedụ ka aga-esi agwọ ọrịa endometriosis site na ọgwụgwọ ndị mmadụ? Knowmara, Svetlana, m, onye dibia bekee, ejula anya mgbe niile na enweghị isi nke ịchọta usoro ọgwụgwọ ọzọ. Iji malite, usoro ndị mmadụ bụ bat na vodka. Ọzọkwa, ị na-atụ aro ...
nwanna na-agbanye nrọ mgbe ọ ṅụrụ mmanya?
Nwanne kumi na nrọ ka mmanya ghaa ime? Ọtụtụ mmadụ mgbe mmanya writeụsịrị mmanya na-ede ma na-eme na palọ ha… Aụla mmanya ọzọ, gụọ akwụkwọ, ọ nwere ike nyere ụbụrụ gị aka ịgbanwe ... Naanị biya na ...
Gwa m, enwere m ike ịṅụ mmanya ma ọ bụ biya ma ọ bụrụ na ị glycine?
Gwa m, enwere m ike ịṅụ mmanya ma ọ bụ biya ma ọ bụrụ na ị glycine? Egwu ihe ọ bụla emee ... Ma mmetụta nke ọgwụgwọ apụghị ichere. Ma gịnị mere i ji nabata ya? O normalizes ...
Gịnị mere o ji afụ ụfụ ịga ụlọ mposi ntakịrị?
Gịnị mere o ji afụ ụfụ ịga ụlọ mposi ntakịrị? O yikarịrị ka cystitis, mgbe ọ na-agba ọsọ. Ọ ka mma ịhụ dọkịta na agbanyeghị, ọ ka mma maka onye ọkà n'ọrịa. Ọgwụgwọ bụ n'ezie ogologo na ...
kedu ihe ọgwụ APSELAN na SUDAFED ?? kedu ọrịa ndị a ga - ewe?
Gịnị bụ mbadamba APSELAN na SUDAFED ?? Kedu ọrịa ha na-ebute? Ọgwụ ndị ị kpọrọ aha ka eji n'ọhịa maka ịche ọgwụ amphetamine na methamphetamine n'ụzọ aka mma ... Usoro a ka ekepụtara ...
Nicotinic Acid na B1 na B6 vitamin hà dakọtara?
Nicotinic acid na B1 na vitamin B6 kwekọrọ? Ee, echefuru m ide, vitamin, ascorbic acid na nicotine - were were ntụtụ dị iche iche were kee ya. Ndị na-arịa ọrịa nrịịrịa kwesịrị ibu ụzọ mee…
Onyenweanyị neurologists !! ! Gịnị ka nkebi ahịrịokwu ahụ nwere 'ike gwụrụ' pụtara? Gịnị ka ihe a na-ekwu?
Onyenweanyị neurologists !! ! Gịnị ka nkebi ahịrịokwu ahụ nwere 'ike gwụrụ' pụtara? Gịnị ka ihe a na-ekwu? Julia! Okwu ahụ sitere na ophthalmology ruo neurosis, site na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ruo n'ọchịchị. Gịnị banyere? Enweghi ike (adighi ike) nke nzuko ...
Heterochromia ọ dị ize ndụ?
O bu heterochromia di egwu? Agba nke iris nke anya na-adabere na ọdịnaya nke melanin na njupụta nke eriri ya. Melanin na-enweta ụzarị ultraviolet, na-echebe megide mbibi radieshon. Colorscha agba nke anya bu acha anụnụ anụnụ, isi awọ, acha anụnụ anụnụ, ...
Gịnị mere ụkwụ m ji jụụ?
Gịnị mere ụkwụ m ji jụụ? O nwere ike ịbụ na ọbara m adịghị adabara ụkwụ m nke ọma, enwere m ọnọdụ dị otú a. Ma ka na-emekarị ...
Kedụ ka mmanya si emetụta imeju na akụrụ?
Kedụ ka mmanya si emetụta imeju na akụrụ? Kpamkpam bibie. Nke ahụ ezughi? Mmanya ethyl na ihe ndị mejupụtara ya na-emebi ọnọdụ nke mkpụrụ ndụ imeju, na-eji nwayọ na-emebi mbibi ha. N'ime obi ...
Ole mgbe okpomoku akpa ume na-anwu?
Ole mgbe okpomoku akpa ume na-anwu? Ihe na - ebute ọnya ụkwara nta bụ ụkwara ume ọkụ (Koch bacillus, Mycobacterium ụkwara nta, mycobacterium ụkwara nta, KUM, TB, BK) bụ microbe nwere oke iwe na -agagidekwa. Koch wand nwere ike ogologo…
Novopassit? Gịnị bụ Novopassit?
Novopassit? Gịnị bụ Novopassit? na-eme ka agwọ ọgwụgwọ dị mma. Novo-Passit bụ ihe ngwọta maka ọrịa ụjọ. Ọ bụ n'ihi ihe a na-ejikọta (nke mejupụtara nke ọgwụ ahụ gụnyere ọgwụgwọ dị iche iche) ọ bụ nnọọ ihe ...
Kedu ka esi emeso mbuba nke akwara obi? ọ bụghị site na ọgwụgwọ ndị mmadụ, kama site na ọgwụ ndị dị irè.
Olee otu esi emeso mbufụt trigeminal? ọ bụghị naanị ọgwụgwọ ndị mmadụ, kama ọgwụ dị irè. buru ụzọ hu onye neuropathologist. Damn, 10 afọ rigoro na mgbidi ahụ .... Nke ọgwụ - finlepsin (aka carbomazepine, ...